Björn Söder oo laga tuuray golaha fulinta SD - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Björn Söder oo laga tuuray golaha fulinta SD
La daabacay måndag 30 november 2015 kl 12.20
Söder: Inaan ku soo noqdaan rajayn
Björn Söder SD, af-hayeenka labaad ee baarlamanka Sweden. Sawirle: Per Groth/TT.
Björn Söder, kana mid ah xubnaha xisbiga Sverigedemokraterna (SD) u matala xildhibaannada baarlamanka, isla-markaana ah ku xigeenka labaad ee af-hayeenka baarlamanka Sweden ayaa laga qaadey xilkii xubin-nimo ee golaha fulinta ee xisbiga SD, middaasina oo ka dambeeysay kulan uu hoggaanka xisbigu ku yeeshay magaalada Lund oo uu uga socday kulan sannadeedkoodii. Tallaabadaasina oo aan ka farxin Söder.
– Way caddahay in waayo-arag-nimada iyo aqoontayda loo arko in aaney ku filayn inaan ku sii nagaado ka mid ahaanshaha golaha fulinta ee xisbiga, ahna hoggaanka ugu sarreeya ee xisbiga laga maamulo, sida uu sheegay Björn Söder, hase yeeshee uu sii hayn doono xubin-nimada hoggaanka xisbiga.
Hase yeeshee uu Mattias Karlsson, ahna guddoomiyaha xubnaha xisbiga ee baarlamanku sheegay in howsha ugu muhiim-san ee Söder tahay af-hayeen-nimada baarlamanka, balse maadaama uu horay u ahaan jiray xoghaynta xisbiga uu ka mid ahaa golaha fulinta ee xisbiga SD. Karlsson ayaa intaa raaciyay iney jiraan fikirro lagu kala duwan yahay.
Björn Söder ayaa sidoo kale lagu dhaleeceeyey mar uu ka hadlay qowmiyadaha laga tirada badan yahay ee dalka ku dhaqan, isagoona sheegay inaan la wada ahaan karin kurdi iyo iswiidhish mar qura.
Söder wuxuu sidoo kale ka mid ahaa xubnihii xisbiga ee ka soo hor-jeedey in xiriirka loo jaro ururkii dhallin-yarada ee xisbiga ee SDU.
Muddo ayaa la isla dhex-marayey in in hoggaanka xisbiga SD iyo Björn Söder ey laba dhinac u kala jeedaan.
SD: In laga war doono heerka xagjirnimo ee muslimiinta reer Sweden
fredag 27 november 2015 kl 13.30